Seddexda ciyaaryahan ee weerarka Liverpool oo ka sara maray Ronaldo, Bale iyo Benzema xili ciyaareedkoodii ugu fiicnaa UCL – Gool FM
(Champions League) 22 Maajo 2018. Wargeyska “Marca” ayaa wuxuu tooshka ku ifiyay rikoodhka gool dhalineed ee Seddexda ciyaaryahan weerarka kaga ciyaarta kooxda Liverpool iyo sidoo kale xidigha BBC ee kooxda Real Madrid, kahor kulanka finalka Champions League.
Labada kooxood ee Real Madrid iyo Liverpool ayaa ku kulmi doona Ukrainegaar ahaan caasimada Kiev 26ka bishan May eek u bagan maalinka Sabtida ee soo aadan, kadib marka ay kasoo kala gudbeen kooxaha Bayern Munich iyo AS Roma.
Wargeyskan caanka ah ayaa wuxuu daboolka ka qaaday tira koobka heerka gool dhalineed ee saddexda weerar kooxda Liverpool, Salah, Mané iyo Firmino in ay ka sara mareen xidigaha Ronaldo Bale iyo Benzema xili ciyaareedkoodii ugu fiicnaa ee tartanka Champions League, mudada 10-kii sano ee lasoo dhaafay.
Xidigaha Salah, Mané iyo Firmino ayaa wada jirkooda xili ciyaareedkan ka dhaliyay tartanka UEFA Champions League goolal gaarsiisan 29 gool, halka BBC xili ciyaareedkoodii ugu fiicnaa UCL ay ka dhaliyeen 28 gool sanadii 2014.
Salah iyo Firmino ayaa waxay labaduba xili ciyaareedkan ka dhaliyeen Champions League min 10 gool, halka Mane uu dhaliyay 9 gool, cel celis ahaan xidig kasta ee ka mid ah saddexdaan ayaa ka dhigan in 90-kii daqiiqaba ay gaareen shabaqa.
Cristiano Ronaldo oo ah gool dhaliyaha ugu sareeya taariikhda tartankan isla markaana xili ciyaareedkan markale hogaaminay ayaa wuxuu 72-kii daqiiqoba ku dhaliyay gool, Benzema ayaa shabaqa gaaray 128-kii daqiiqaba mar, sidoo kale Bale ayaa shabaqa ku gaaray 266-kii daqiiqaba mar.
Lionel Messi oo hal fursad muhiim ah u ogolaanaya Monamed Salah